နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: The Lost Symbol
စလုံး ၄၀ နီးပါးပဲ။
စလုံးမှာ ဘယ်ဈေးလဲ မသိပါ။
၁၅ စက်တင်ဘာက ထွက်တာ။
အရင် ၄ အုပ်ထက်တော့ ပိုကောင်းမယ် ဆိုပဲ...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 12:08 AM
PAUK September 24, 2009 at 1:01 AM
khin oo may September 24, 2009 at 1:03 AM
khin oo may September 24, 2009 at 1:11 AM
အင်.ဒီနေ့. ပေါ့ ။ ဝယ်လာတာလား။
mae September 24, 2009 at 2:18 AM
ဖတ်ပြီး ဒီဘက်ခဏငှားပါ၊ ဈေးကြီးလို့ ဝယ်မဖတ်နိုင်ဘူး
Vista September 24, 2009 at 9:49 AM
၄၅ USD ဆိုလို့ ပြေးလာခဲ့တာပါကွယ်
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁လက ကြော်ညာထားတယ်
ကွက်တိပါပဲ အရင် ဒုတိယတစ်အုပ်ကမပြီးသေးဘူးဆိုတော့
ပြီးတာနဲ့ ဈေးကျတာနဲ့ဟိဟိ
လိုချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ၉၉ရင်းဂစ်က ဈေးများလွန်းတယ်။ ၃၅ရင်းဂစ်လောက်အထိ ကျသွားအောင် စောင့်လိုက်ပါဦးမယ်
Ko Boyz September 24, 2009 at 11:40 AM
ပေါက်- မက်ဒေါ်နယ်က အာလူးကြော်ဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုက်သလောက် ဝါးသွားပါ။
အန်တီ - ဘာတွေ ရေးထားလဲလို့ မနေ့ညကတည်းက စဉ်းစားနေတာ။ ဒီနေ့မှ အဖြေပေါ်တော့တယ်။ ၁၂းဝ8ကျတော့ အရှေ့က လေးခုနဲ့ မဆိုင်ပဲနဲ့ ဘာလို့ ထည့်ထားတာလဲဟင်...။ ဘောက်ချာဖြတ်ပိုင်းနဲ့ သေချာ ရိုက်ပြထားတာတောင် ဝယ်လာတာလားဟင်တဲ့။
မဲလေး - စာအုပ်ဆိုဒ်က ရှေးခေတ် တရားစာအုပ်ဆိုဒ်လို ခပ်ရှည်ရှည်ထူထူ Hard Cover နဲ့မို့လို့ ဒီဈေးနဲ့ ဒီစာအုပ်နဲ့ အသစ်တစ်အုပ်အနေနဲ့ ဒန်ဘရောင်း ရေးထားတဲ့ စာအုပ်အနေနဲ့.. အနေနဲ့.. အနေနဲ့ ဆိုတော့ တန်တယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ပုံမှန် soft cover တွေက မထွက်လောက်သေးဘူးလေ။ ကြော်ငြာကတည်းက ဖတ်ချင်နေတာနဲ့ လေဆိပ်မှာတွေ့တုန်း ဆွဲလာလိုက်တာ။ စာအုပ်ပုံကြီးကို တစ်ယောက်တစ်အုပ် ဆွဲယူလိုက်တာ ကိုယ့်ရှေ့မှာတင် ပြိုက်ကနဲ ကုန်သွားတယ်။
Vista - စောင့်နိုင်တယ်ဆို စောင့်လိုက်ပေါ့ကွယ်...။ ကောင်းပါတယ်။ ဈေးကျနိုင်ပါတယ်။
သဉ္ဇာ - ၃၅ ရင်းဂစ်တော့ မရဘူးထင်တယ်။ အရင်စာအုပ်တွေတောင် အခု ပရိုမိုးရှင်းကို ၄၂ ရင်းဂစ်နဲ့ တွေ့ခဲ့သေးတယ်...။ အခုဆိုဒ်က အရင်စာအုပ်ဆိုဒ် မဟုတ်ဘူး။ ဆိုင်တွေမှာ တစ်ချက် ကြည့်လိုက်ပါလား...။
ကြည် September 24, 2009 at 12:39 PM
ရင်းဂစ် ၉၉.၉၀ တန် စာအုပ်ကို တွေ့တာနဲ့ တန်းကနဲ ၀ယ်လိုက်တဲ့ ဒီဘလောခ့် ပိုင်ရှင်သည် လခကောင်းသူဖြစ်ရမည်။
Ko Boyz September 24, 2009 at 12:46 PM
တစ်လစာသုံးစရာတွေထဲက ဘယ်ကိုတာကို ချိုးခြံရတော့မယ်ဆိုပြီး စိတ်တွက်တွက်နဲ့ ဝယ်လာတာကို ထည့်တွက်ပေးပါကိုကိုကြည်...။ (ဥပမာ-စီးတီးဟောတွင် ထမင်းစားခြင်းအမှုကို တစ်လတိတိ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း...။)
MANORHARY September 24, 2009 at 1:25 PM
မထွက်ခင်က ၃၉ကျပ်ကျော်တယ် ခုတော့ ၂၉ကျပ်ဖြစ်သွားရှာပြီ
Unknown September 24, 2009 at 1:34 PM
အင်း.. hardcover ကြီးဆိုတော့ ၃၅ရင်းဂစ်ထိတော့ ကျမယ့်ပုံ မရှိဘူး။ စာရွက်မည်းညစ်ညစ်လေးတွေနဲ့ ပုံပြန်နှိပ်တာဘဲ စောင့်ရတော့မယ်။
Rita September 24, 2009 at 1:56 PM
ကိုယ်လဲ ဖတ်ချင်တယ်။ ဖတ်ပြီးနားမလည်မှာလဲ စိုးတယ်။ ဘာသာပြန်ဖတ်ပြီးသားတောင် မူရင်းကို မနည်းဖတ်ရတဲ့ skill နဲ့မို့။
ဒါနဲ့ အရင် လေးအုပ်ထက် ကောင်းတယ်ဆိုတာ ဘာလဲ။ နားမလည်ဘူး။
လေးတွဲထွက်တာလား။ ဗားရှင်းလေးမျိုး ထွက်တာလား။
ကိုဘ ဘလော့လာဖတ်မှပဲ အီးလိုတောင်မှ မူရင်း ဖတ်တဲ့လူတွေ အတော်များမှန်း သိပြီး အားတောင် ငယ်ချင်သလိုလို။ ကိုယ်က ကိုယ်လိုတွေ များတယ် မှတ်နေတာ။
maylay September 24, 2009 at 2:22 PM
စာအုပ်ငှားပါ။ မဟုတ်ရင် ဖတ်ပြီး ပြန်တင်ပါ ကိုကြီး ။ ဖတ်ချင်လို့ ဟီးးး ခရီးသွားတာ မောလား။ စာအုပ်ကိုတောင် အပြေးအလွှား ဆွဲလာရတယ်ဆိုတော့လေ အပြန်လက်ဆောင် မုန့်ကို ကျွေးခိုင်းတော့ပါဘူး။
Ko Boyz September 24, 2009 at 3:44 PM
မနော်ဟရီ - အစ်မရေ..။ ဒီအေးရှားမှာတော့ ဟစ်နေတုန်းပဲ။ ဆိုင်က ပြောတာကတော့ ၄ ခေါက်အော်ဒါ ထပ်မှာလိုက်ရတယ်တဲ့။ ဈေးက မူရင်းဈေးပဲ.. မလျှော့သေးဘူးတဲ့။
သဉ္ဇာ - စာရွက်ဝါညစ်ညစ်တွေနဲ့က ထုတ်ဖို့က ကြာဦးမယ်ထင်တယ်။
ထွက်မယ်ဆိုရင်တောင် ဈေးက ၃၀ ကျော်မယ်ထင်တယ်။ အရင် လေးအုပ်တုန်းက တစ်အုပ်ကို ပျှမ်းမျှ ၄၀ ရင်းဂစ်နဲ့ ကေအယ်လ်ကနေ ဝယ်ထားတယ်။ (လေးအုပ်တွဲ ကော်လက်ရှင်အနေနဲ့ ထုတ်ထားတာ။ အေးရှား ဗားရှင်းတဲ့။ စလုံးထက်တော့ ဈေးသက်သာတယ်...။)
ကြည့်ရတာ ကေအယ်လ် လေဆိပ်က ဈေးသက်သာပုံရတယ်။
ရီတာ- အရင်လေးအုပ်ဆိုတာက ဒန်ဘရောင်းရဲ့ ထွက်ခဲ့တဲ့ လေးအုပ်ကို ပြောတာပါ။ (Davici Code, Deception Point, Digital Fotress, Angenls&Demons ဆိုတဲ့ စာအုပ်တွေပါ။)
ထွက်ပြီးသမျှထဲက ဒါဗင်ချီကုဒ်နဲ့ အိန်ဂျယ်လ်အဲန်ဒီမွန်ကိုပဲ ကြိုက်တယ်။
မေလေး- စာအုပ်ငှားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ တစ်လလောက် စောင့်ပါ။ ဟဲ။ ဗြိတိသျှလို သိပ်မကျွမ်းတော့ တစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းကို သဘောပေါက်အောင် မနည်း ဘာသာပြန်ဖတ်နေရတယ်။
ksanchaung September 24, 2009 at 9:47 PM
စာအုပ်တွေ့ရင်တော့ စိတ်ဝင်စားသားပဲ။ ဖတ်ချင်တယ်။ ကောင်းမကောင်း ဖတ်ပြီးရင် အကြောင်းကြားပါ။ ဒါပဲ။
jr.lwinoo September 25, 2009 at 1:01 PM
စာအုပ်ဈေးထက် အထဲကဟာတွေ နားမလည်မှာ စိုးတယ်။
အရင်လေးအုပ်ထဲက Digital Fotress ကို မသိဘူး။
Ko Boyz September 25, 2009 at 2:48 PM
ကိုကေ - ကောင်းမှာပါ။ ဒါဗင်ချီကုဒ် အဆက်ဆိုတော့လေ...။
ဂျူနီယာ - Digital Fortress က အိုင်တီနဲ့ နည်းနည်းဆိုင်တယ်။ ဇာတ်က အဆုံးသတ်လောက်မှာ နည်းနည်းအိုင်သွားတယ်။ သိပ်မကြိုက်မိဘူး။
အခု The Lost Symbol ကိုတော့ မဖတ်မိသေးဘူး။ ပြန်ရောက်တာနဲ့ အလုပ်တွေ ရှုပ်နေလို့...။
Rita September 25, 2009 at 9:53 PM
ကိုယ့်အဆင့်လောက်ဆို ဖတ်ရတာ အဆင်ပြေမယ်လို့ ထင်လားဟင်။ ထင်တယ်ဆိုရင် ပြီးရင် ငှားပါ။
ခင်မင်းဇော် September 27, 2009 at 11:36 AM
တခါမှမဖတ်ဖူးဘူး ကိုယ်က အီးလိုမရဘူးကွယ်.. အားငယ်လိုက်ထှာ..ရီတာ့ထက်ဆိုးပါတယ်..
khin oo may September 27, 2009 at 12:37 PM
E လို ညံ့လို့ ကိုင်တောင်မကြည့်ဘူးဘူး ခင်မင်းဇော်. / ကြားလဲမကြားဘူးဘူး. ။ ဘလော့ပိုင်ရှင်ကို အားနာလို့ဝင်ယောင်ပေးနေတာ။ဘာမှ အားမငယ်ပါနဲ့။
သက်ဝေ October 5, 2009 at 4:25 PM
ဖတ်ပြိးရင် ကောင်းမကောင်း အကြောင်းပြန်ပါ... (ခပ်တည်တည်ပဲ)
** ကြည်ဆိုတာ ကိုကို မဟုတ်ဖူးထင်တယ် သေချာလား ကိုကိုဆိုတာ...
Email နှင့် ဘလော့ပို့စ်တင်ခြင်း။
ကျွန်တော် ဝယ်သိမ်းထားချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားများ
Correct Answer for Irish College Entrance Exam
နောင်တစ်ချိန် အိုမင်းမစွမ်းချိန်၌ အမှတ်ရစေခြင်းငှာ...
ရင်ခုန်သံ ကြိမ်နှုန်းများ ထပ်တူကျခြင်း။